Ụlọ griin ha na-adị otu
Ụlọ griin ha dị ọtụtụ
Gaa na Factory Online
Osisi strawberry na ịkụ ihe na-achọ ihe ndị nwere ezigbo njide mmiri, dị ka ajị anụ na aki oyibo. N'oge okpomọkụ, okpomọkụ nke germination bụ 20-25. Strawberries dị ka oke ọkụ, ọkacha mma karịa ọkara ụbọchị n'ụbọchị. Onye mara mma ...
Kedu uru dị na teknụzụ ịkọ ugbo na-enweghị ala nke oge a
Ịkụ mkpụrụ nke enweghị ala na-ezo aka n'usoro ihe ọkụkụ nke na-adịghị eji ala eke eme ihe ma a na-eji mkpụrụ osisi eme ihe ma ọ bụ naanị mkpụrụ osisi a na-eji maka ịkụ mkpụrụ, na ihe ngwọta na-edozi ahụ na-eji mmiri mmiri eme ihe mgbe a kụrụ ya, nke nwere ike ịzọpụta ala. Ebe ọ bụ na soi...
Ihe anyị kwesịrị ime iji mụbaa mmepụta hemp
Maka osisi, ọkụ, carbon dioxide, mgbaba mmiri, okpomọkụ, na iru mmiri bụ isi ihe na-emetụta uto. N'ịzụlite hemp, ma ebumnuche gị bụ CBD, mmanụ hemp, akwa akwa hemp ma ọ bụ ndị ọzọ. njikwa gburugburu ebe obibi nke mmadụ mere na-eme ka mmepụta nke ...
Ihuenyo nke multi span griin haus
Nke a bụ griin haus multi-span mere site na AXgreenhouse Ọ bụ akụkụ nke ogige ụlọ ọrụ ifuru na-arụ ọrụ zuru oke Ogige ahụ nwere nyocha sayensị, ụlọ akwụkwọ ọta akara, mmepụta ihe, ọrụ ngosi, wdg. A na-eji griin haus atọ a dị iche iche maka ịkụ mkpụrụ na mmepụta ihe. .
Ụdị ụzọ abụọ nke sistemu ogbugba mmiri n'ụkwụ kwụsịtụrụ nkenke
Enwere ọtụtụ ụzọ ịgba mmiri n'ubi na greenhouses. Iri mmiri ntapu, ogbugba mmiri n'obere obere, hanging sprinkler ogbugba mmiri n'ubi, hydroponic ogbunigwe, ịgba mmiri, ebb-flow irrigation, wdg. Ndị a ụzọ ogbugba mmiri n'ubi nwere uru na ọghọm dị n'ihi...
Okwu mmeghe nkenke maka ụlọ ịhịa aka n'ahụ ọkụ
1. Ngwakọta nke sunshade usoro nke griin haus Isi akụrụngwa nke usoro na-agụnye moto a na-achọsi ike, ụgbọala na-adọba ụgbọala, ụgbọala ogwe, rack na pinion gia, nkwado nghọta wiil, ụgbọala profaịlụ n'akụkụ, na ákwà mgbochi ákwà mgbochi. ...
Banyere okpomọkụ nke ụfọdụ griin haus osisi
Na griin haus azụmahịa ruo ọtụtụ afọ. Anyị edoziwo nsogbu dị iche iche gbasara griin haus. Site na mmepe nke oge, a na-etinyekwa griin haus maka ebumnuche dị iche iche. Ejiri ya dị ka ebe nchekwa, dị ka ebe obibi ndị njem nlegharị anya, dị ka ebe ngosi ihe ngosi, wdg. Otú ọ dị, isi nzube nke green ...
Springworks ga-agbakwunye 500,000 square ụkwụ nke hydroponic ugbo griin haus
Lisbon, Maine - Springworks, nke kasị ukwuu na nke mbụ gbaara ezi àmà organic anhydrous ugbo na New England, taa mara ọkwa atụmatụ ịgbakwunye 500,000 square ụkwụ nke griin haus ohere. Mgbasawanye nke ukwuu ga-aga n'ihu na-ejere ndị ahịa kacha ukwuu nke Maine Farms, Supermarket nri niile na Hannaford Su ...
Aurora Cannabis na-etinye 1.7 nde square ụkwụ nke behemoth na mpaghara ahịa
Aurora Cannabis na-ezube ibutu otu n'ime griin haus kachasị na nke kachasị ọnụ ejiri na-eto cannabis n'akụkọ ihe mere eme, mana onye ọ bụla nwere ike ịzụ ahịa nwere ike na-arụsi ọrụ ike iji nwetakwu mmefu ka e wee rụchaa ọrụ ahụ nke ọma. Dị ka ihe nkwado ọha dị, Aurora etinyela ego ...
banyere AX griin haus
Dị ka anyị niile maara, China bụ obodo nwere ogologo omenala omenala. Mmepụta ihe ọkụkụ anọgidewokwa na-etowanye ike site na mmepe nke teknụzụ. Na mmalite, anyị rụrụ ọrụ n'obere ụlọ dara dara ada. . . .
Ụdị nke Greenhouse
Kedu ụdị griin haus dị? Enwere ụzọ abụọ iji mata nke a. Ụzọ mbụ: Dị ka ihe mkpuchi si dị iche iche nke griin haus. Kemgbe ọtụtụ afọ ebe griin ha dị…
Ngwa Greenhouse Fund
Anyị nwere ihe dị iche iche nke griin haus Mepụta mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, na-eto ifuru, na-eto eto na-eto eto ma ọ bụ nyocha cannabis Enwere ihe abụọ iji nweta ihe mgbaru ọsọ ndị a, otu bụ onye ahịa na nke ọzọ bụ ọkachamara AXgreenhouse Maka ndị ahịa, ego bụ ihe dị mkpa na ya. chọpụta...
Adreesị: NO.879 Road Ganghua, n'ebe ugwu nke Industrial Port, Pidu District, 611743, Chengdu, Sichuan Province, China